Ezihamba phambili Archives | Umbele
Category: Ezihamba phambili
AMANANI okudla asalokhu ekhuphuka njengoba ngoNovemba ebewuR4 018,22 esuka kuR3 916, 72 ngo-Okthoba, nokusho ukunyuka ngo-2.6%. Ezinyangeni ezintathu ezidlule ukudla kunyuke ngo-4.2%. Loku kuvezwe wumbiko wocwaningo wePietermaritzburg Economic Justice & Dignity Group nolugxile ekulandeleni ukuthi amanani okudla abiza malini, ikakhulukazi uhlobo lokudla oluthengwa ngabantu abahola kancane nabaphila ngezibonelelo zikahulumeni. Lolu cwaningo olwenziwa ezitolo zokudla eziwu-44 nasemabhusha awu-30 lwenziwa KwaZulu-Natal, eGauteng, eNorthern Cape naseNtshonalanga Kapa.
UMcwaningimabhuku-jikelele osezoshenxa, uMnu uKimi Makwetu, umbongele uNksz uMaluleke. UMakwetu uthe akangabazi ukuthi uNksz uMaluleke ukulungele ukwenza lo msebenzi. Osekuzolandela manje wukuthi iPhalamende kumele lisemukele lesi siphakamiso bese lisidlulisela kuMengameli, okuzothi … Read More
I-COMPETITION Tribunal inqume ukuthi ngeke usavunyelwa uShoprite ukuthi ube nezivumelwano ezithi yiwona kuphela ongaba yisitolo sokudla lapho usuke uqashe khona. Le nhlangano ebheke ukuncintisana ithe lezi zivumelwano kumele ziphele ngokuphazima kweso ezindaweni ezingaphandle kwasemadolobheni bese kuthi emadolobheni khona kumele kuphele iminyaka eyisihlanu seziphelile. Lesi sinqumo sizovuna abezitolo ezincane futhi sizokwenza nabathengi bakwazi ukukhetha ezitolo eziningi.
I-PPC ikhiphe umbiko wayo wezimali wonyaka ophele ngoMashi 31, noveze ukuthi imali engenile yehle ngo-2%, yaba wuR10.2 billion uma kuqhathaniswa nonyaka wezimali odlule.
INKAMPANI elawula izikhumulo zezindiza kuleli i-Airports Company South Africa imemezele ukuthi kungenzeka idayise izabelo zayo kwi-Mumbai International Airport, lapho inesabelo sika-10% khona, nakwi-Grupar, lapho ino-20% khona. Le nkampani ithe kukhona abantu abayicele ukuthi ibadayisele la masheya.
INSIMBI Group ithe ilindele umbiko wayo wezimali wezinyanga eziyisithupha eziphele ngo-Agasti 31. Iveze ukuthi imali engenile yehle phakathi kukaR800 million noR900 million, nokwenze ukuthi inzuzo yehle ngemali ephakathi kukaR65 million noR75 million.
I-CAPITEC ikhiphe umbiko wemali wohhafu wonyaka ophele ngo-Agasti. Inzuzo yehle ngo-78%, yafinyelela kuR650 million uma kuqhathaniswa nohhafu wonyaka ka-2019 kanti nophiko olugxile kwezamabhizinisi lulahlekelwe nguR47 million. Leli bhange lithe nakuba iCOVID-19 ishaye yezwela nakulona kodwa isibalo samakhasimende alo sinyukile sisuka ku-13.9 million ngoFebhuwari nonyaka safinyelela ku-14.7 million ekupheleni kuka-Agasti nokwenze imali engenile uma ingabalwa lena yabahluleke wukukhokha ibe nguR11 billion.
ISIBALO sabantu abangasebenzi eNingizimu Afrika sinyuke ngo-2.3% safinyelela ku-42% ngekota yesibili ka-2020. Ngokwezibalo ezikhishwe yiStatistics South Africa izolo, isibalo sabantu abasebenzayo sehle ngo-2.2 million safinyelela ku-14.1 million uma kuqhathaniswa nekota yokuqala yonyaka. Kanti isibalo salabo abaphelelwe wumdlandla wokubheka umsebenzi sona sehle ngo-447 000.
I-Capitec imemezele izinguquko kwibhodi yayo. Iqoke uNksz uCora Fernandez, uSolwazi Stan du Plessis noMnu uVusi Mahlangu. UMnu uKabelo Makwane usulile kuleli bhodi, kanti uMnu uJock McKenzie yena uzothatha umhlalaphansi ngoMeyi ngonyaka ozayo.